आफ्नै बिहेमा यसरी खुलेर छमछमी नाचिन् प्रियंका! हेर्नुहोस् भिडियो – PathivaraOnline
Home > भिडियो > आफ्नै बिहेमा यसरी खुलेर छमछमी नाचिन् प्रियंका! हेर्नुहोस् भिडियो
आफ्नै बिहेमा यसरी खुलेर छमछमी नाचिन् प्रियंका! हेर्नुहोस् भिडियो
admin March 1, 2020 March 1, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन	0
काठमाण्डौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका दुई सफल कलाकार प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीले आफ्नो स्वयम्बरको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन्। हिजो मात्र विवाह गरेका यो जोडीले सामाजिक संजालमा तस्विर सार्वजनिक गरेका हुन् । लामोसमय देखि प्रेममा रहेका यी दुईले
हिजो नै रिसेप्सन पार्टी समेत दिएका थिए।बुढानिलकण्ठ स्थित पा,र्क भिलेजमा यी दुवैले विवाह गरेका थिए। सोहि स्थानमा दुवैले रि,से,प्सन पा,र्टी समेत दिएका थिए। आयंका जोडीलाई हाम्रो तर्फबाट सफल दा,म्प,त्य जीवनको शुभकामना ।
हेमाले रुँदै भनिन्ः मलाई भाटा हा’न्न प्रहरीलाई कारबाही हुनुपर्छ, नभए राष्ट्रपति भवन अगाडि धर्ना बस्छु’
काठमाडौँ– केही महिनायता हेमा श्रेष्ठ सामाजिक सञ्‍जालहरुमा भाइरल छिन्। काखमा बच्चा च्यापेर न्यायका लागि प्रहरी कार्यालयमा भौतारिरहेको हेमाका भिडियो यूट्युबमा बढी खोजिएका सामग्रीहरुमध्ये पर्छन्। संखुवासभाको तत्कालिन जलजला गाविस स्थायी घर भएकी ३३ वर्षीया हेमा अदालतबाट फ‍ैसला हुँदासमेत श्रीमानबाट न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएकी छिन्। हेमाको केही वर्षअघि संखुवासभाको जलजलाकै दोर्छो शेर्पासँग विवाह भएको थियो।
विवाहपछि उनीहरुबाट एउटा छोरी जन्मियो। तर शेर्पाले उक्त छोरी आफ्नो नभएको दावी गरेपछि हेमा अदालतको शरण पुगिन्। अदालतले छोरी शेर्पाकै भएको भन्दै नाता कायम गरिदियो। त्यतिमात्र होइन, मानाचामल भराउने आदेश पनि दियो। तर त्यसपछि शेर्पा सम्पर्क बाहिर भए। श्रीमानले जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै हेमा अहिले न्यायका लागि लडिरहेकी छिन्। प्रहरीले शेर्पाको खोजि भइरहेको बताएपनि हेमाले चित्त बुझ्दो जवाफ भेटिरहेकी छैनन्।
उनै हेमालाई बिहीबार भैसेपाटीस्थित एक निजि निवासमा प्रहरीले नि’र्मम कु’ट’पि’ट गर्‍यो। त्यहाँ उनी आफ्नो न्यायका लागि भने गएकी थिइनन्। माला शाह नाम गरेकी एक महिलाले आफुलाई हेम खत्रीले लामो समय सम्बन्धमा रहेर धोका दिएको दावी गर्दै खत्रीको घर घेर्न केही अधिकारवादीलाई लिएर पुगेकी थिइन् जसमा दुधे बालक च्यापेर हेमा पनि मिसिएकी थिइन्। घरबाट ती महिलाहरुलाई निकाल्नेक्रममा प्रहरी निरिक्षक देवीप्रसाद पौडेलले बालक च्यापिरहेकी हेमालाई ल’खे’टी ल’खे’टी पि’टेका थिए। खत्री नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल पनि हुन्।
भैँसेपाटी प्रहरी प्रभागका प्रमुख पौडेल आफै घटनास्थल पुगेर हल्ला गरिरहेका महिलामाथि हा’तपा’तमा उत्रिएका थिए। सामान्यतया महिलालाई नियन्त्रणमा लिन महिला प्रहरी नै परिचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रमुख टेकप्रसाद राईले घटनाको छानबिन गर्न एसपी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको र प्रहरी निरीक्षक पौडेलसँग तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए।
पति बाहिर भएको बेला श्रीमति गर्भवतीः श्रीमतिले दिइन् दुनियाँ चकित हुने यस्तो जवाफ, कुरा सुनेर सबै अचम्मित हेर्नुहोस्
१६ वर्षिया अनुले बुवालाई दागबत्ती दिदै बसिन क्रिया !
अन्ततः भारतविरुद्ध यसरी गर्जिए प्रधानमन्त्री, कालापानी छोड्न चेतावनी (भिडियाे हेर्नुहाेस्)
विवाहका दिन बेहुला भागेपछी बेहुलीले चेनले बाँधेर सडकमै यसरी घिसारिन् (भिडियो)
कलेज पढ्ने एक युवतीको यस्ताे भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)